टेरेसा ज्युडिस स्वीकार्छिन् कि उनी सोच्छन् कि पति जो उनलाई धोका दिन्छन् - समाचार
टेरेसा ज्युडिस अन्ततः स्वीकार्छिन् कि उनको विचार छ कि परदेशी पति जोले उनीलाई धोका दिएः विवरण
अफवाहहरू र टेबलोइड रिपोर्ट गर्दछ कि जो Giudice अब अपहरण पत्नीको लागि अविश्वासी थियो टेरेसा ज्युडिस त्यहाँ वर्षौं बाहिर छन्। तर अब, लामो समयदेखि दावीहरू अस्वीकार र बेवास्ता गरेपछि, टेरेसाले अन्ततः स्वीकार गरिरहेकी छिन् कि उनी विश्वास गर्दछन् कि उनको २० वर्षको विवाहको क्रममा जोले उनलाई धोका दिएको छ।
चार्ल्स साइक्स / ब्राभो / एनबीसीयू फोटो बैंक गेट्टी छविहरू मार्फत
उनी फेब्रुअरी १२ को नयाँ जर्सीको रियल हाउसवाइजको एपिसोडमा जोको कथित बेइमानीको बारेमा वास्तविक छिन्, जुन २०१ 2019 मा फिल्म गरिएको थियो र जो अझै इमिग्रेशन र भन्सार प्रवर्तन थुनामा तीन वर्षको संघीय जेल कारावासपछि थिए। (जो आईसीईबाट अक्टुबरमा रिहा गरिएको थियो र आफ्नो देशी उडे इटाली आफ्नो निर्वासन अपील को समाचार प्रतीक्षा गर्न ।)
एक हप्ताको अन्तमा जर्सी शोरमा पछाडि उनको ब्राभो कार्यक्रमको कलाकार, टेरेसाको साथ - जो जोबाट उसलाई अलग गर्ने घोषणा गर्‍यो २०१ 2019 डिसेम्बरमा - उनले भने कि उनको लागी जो उनको लागि त्यति राम्रो थिइन जस्तो उनको विवाहको समयमा उनीसँगै थिईन्। 'त्यहाँ त्यहाँ अफवाहहरू थिए,' उनले भनिन TooFab । जब मार्गरेट जोसेफको पति जो बेनिग्नोले टेरेसालाई सोधे, 'तपाईंलाई लाग्छ कि ऊ तपाईंको पछाडि पछाडि मूर्ख थियो?' टेरेसाले भनिन् उनले।
के क्रिस रकका बच्चाहरू छन्?
'सुन्नुहोस्, उनको एउटी केटीको साथ छुट्टै सेलफोन थियो,' टेरेसाले भनिन्। 'मैले यो पता लगाए! यो उनको पूर्व प्रेमिका बहिनी थियो। उनले भने कि उनी आफ्नो सम्बन्ध विच्छेदबाट गुज्रिरहेकी छिन्। ऊ उसको घर बेच्न कोसिस गर्दै थियो। ' टेरेसाले भनिन् कि यो हुनु अत्यन्त कठिन अवस्था हो। 'जस्तै, मैले आफ्नो जागिर छोडिदिएँ। [हाम्रो जेठी छोरी] Gia [[त्यस समयमा] थियो। र म जस्तो थियो, 'म के गइरहेको छु?' म त छोडिनु पर्छ, ठीक छ? मैले त्यसो गरेन किनकि त्यसले मलाई अस्वीकार गर्नुभयो। मैले उनलाई विश्वास गरें, 'उनले भनिन्।
जेफ डेली / इनभ्शन / एपी / आरएक्स / शटरस्टक
टेरेसाको भाइ जो गोर्गाले उनलाई के विश्वास गरी भनेर सोधिन्। 'आज, तिमीलाई विश्वास छ कि उसले तपाईंलाई धोका दियो?' उनले सोधपुछ गरे। उनले जवाफ दिइन्, 'हो, अब म गर्छु!'
क्याटलिन जेनर फेरि ब्रुसमा जान चाहन्छन्
टेरेसाले आफूलाई आफ्ना साथीहरूलाई बताइन्। 'मँ भनिरहेछु, कहिलेकाँही अन्धा हुन्छु।' अघिल्लो हप्ताको 'RHONJ' एपिसोडमा टेरेसालाई भनेका भाइ जो, 'मैले [तपाईको पति जो] सँग राम्रो सम्बन्ध रहेको मैले सोचेकै थिएन। म मात्र उसले तपाईलाई जस्तो व्यवहार गरेको तपाईले देख्नु भएन '- अनि उनलाई भने,' सुन्नुहोस्, म भन्दै छु, तपाईं फोनमा हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंले चिन्ता लिनु पर्छ - त्यो विवाह होइन। '
पछि स्वीकारोक्तिमा, टेरेसा थप खोलियो। 'यो धेरै लामो समय लाग्यो, र यो अझै पनी मलाई स्वीकार्न को लागी गाह्रो छ, तर यो मेरो आँखा खोल्न को लागी म आफै गर्न को लागी ,णी छ,' उनले जोको बेवफाई बारे मा उनको श of्का बारेमा भने।
एस्ट्रिड स्टोइअर्ज / ब्राभो / एनबीसीयू फोटो बैंक गेट्टी छविहरू मार्फत
बहिनी सासू मेलिसा गोर्गा आफ्नै व्यक्तिको बयानमा अझ बढी प्रत्यक्ष थिई: 'सुन्नुहोस्, मलाई लाग्दैन कि यो कुरा कसैको कानमा छ कि जो टेरेसालाई धोका दिएको छ,' उनले भनिन्। 'तर यहाँ समाचार यो छ कि टेरेसाले अन्तमा यसलाई स्वीकार्यो।'
जो जोन कर्बेटसँग विवाह गरेका छन्
टेरेसाले आफ्ना कलाकारहरूलाई पनि स्वीकार गरिन् कि उनले जोकोप्रति 'धेरै असन्तुष्टि' पाएको छ र विलाप गरिन्, 'म सिद्ध जस्तै थिएँ, उत्तमf—इन्ग पत्नी! '
भोलिपल्ट बिहान, टेरेसाले भने कि उनी जोको बारेमा सब थोकको बारेमा नराम्रो लागी। 'जस्तै, मेरा छोरीहरू पूजा गर्नु उनीहरुका बुवा, 'उनले भने। तर कास्टमेट डोलोरेस क्याटानियासँग यो थिएन। 'त्यो नियम हो तिमी, त्यसोभए तपाईलाई थाहा छ, किनकी तपाईलाई सबै थाहा छ र तपाई सबै मार्फत जानुहुन्छ, तपाईले कहिले उनीहरुको बुबालाई नराम्रो हुनुहुन्न। दिनभरि सबै, वकीलहरू, वकिलहरू, पैसा, पैसा। तपाईले उसलाई कहिले पनि भन्नुभएन, 'डोलोरेसले भने।
जुलियो कर्टेज / एपी / आरएक्स / शटरस्टक
टेरेसा राजी भए। 'होइन, र मलाई लाग्छ कि म पनि त्यसका लागि असन्तुष्ट छु,' उनले भनिन्। 'यो जस्तो छ, म जीवनमा धेरै पछि हुनुपर्छ। मेरो सबै व्यवसाय। मैले धेरै निर्माण गरें! र त्यसपछि सबै कुरा तल दुर्घटनाग्रस्त भयो 'कारण कानूनी सामान । म तपाईंसँग इमान्दार बन्छु, मँ हर समय पैसाको चिन्ता गर्छु। '
के जोनाथन राइस मेयर्सले गोप्य रूपमा लामो समयदेखि माया मारा लेनसँग विवाह गरे?
ली मिशेल लेट प्रेमी कोरी मोन्टेथलाई उनको मृत्युको sixth औं वार्षिकोत्सवमा सम्मान गर्छिन्
क्रिस्टन स्टुअर्ट र स्टेला मैक्सवेल
rachael leigh कुक नाक काम
कसरी ब्ल्याक chyna जस्तो शरीर प्राप्त गर्न
लारा स्पेन्सर बायाँ gma छ
एलान thicke नेट मूल्य २०१ 2017